Lahatsary: Manam-pahaizana tanora vao misondrotra any Inde, Singapore ary Afrika Atsimo · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Mey 2011 0:01 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, Español, 繁體中文, 简体中文, 日本語, Português, English
Efa nivoaka ny filaharan'ireo mpifaninana hiatrika ny dingana manasa-dalana amin'ny Tetikasan'ny Google Science Fair. Na dia nisokatra ho an'ireo tanora eo anelanelan'ny 13 sy 18 taona avy amin'izao tontolo izao aza izany, mahaliana ny manamarika fa i Etazonia, Singapore ary Inde no nahazo ny isa ambony indrindra tao anatin'ireo mpiatrika ny dingana manasa-dalana 60 voafantina, izay ahitana ihany koa ireo tafiditra avy any Nouvelle-Zélande, Afrika Atsimo, Fanjakana Mitambatra [angletera] ary Kanada.
Ny hahazo ny Loka Goavana indrindra dia avy amin'ireo manam-pahaizana siantifika tanora 60 ireo: hifantina mpifaninana 15 hanao ny dingana famaranana ireo mpitsara izay hisidina mankany Etazonia ary hampahafantatra ny tetikasany ka ho fantenana avy amin'izany ny hahazo ilay loka goavana indrindra. Ary ny mpifaninana amin'ny dingana manasa-dalana izay mahazo vato be indrindra dia hahazo ny mari-pankasitrahan'ny Safidin'ny Besinimaro sy vatsim-pianarana 10 000 dôlara amerikana.
Ny Janoary lasa teo, tamina lahatsary fanasana iray no nanombohan'ny Tetikasa Google Science Fair. Ilay lahatsary dia Rube Goldberg karazana raboto izay mampiasa ireo fitaovana siantifika sy ny fanampiny mba hampisehoana fa fiteny manerana izao tontolo izao ny siansa. Ary toa nandeha tsara izany: araka ny lahatsary manambara mba hifidy ireo mpiatrika ny dingana manasa-dalana, mihoatra ny 7000 ireo nisoratra anarana avy any amin'ny firenena 90 samihafa.
Luke Taylor avy any Afrika Atsimo dia mpifaninana ao amin'ny sokajin'ireo 13-14 taona. Ao anatin'ny lahatsary fampahafantarany, manazava ny fizotra ao ambadiky ny fampianarana raboto [robot]hanaraka ireo fanazavana mikasika ny Fitenenana teny Anglisy.
Any Inde, Chaithya G. R. ary Siri G.R. nieritreritra momba ny fitomboan'ny loza eny amin'ny fiampitana lalamby tsy misy olona manidy izay ahiahian'izy ireo ho vokatry ny tsy fahampian'ny marika fampahafantarana fa misy fiaran-dalamby handalo. Noho izany dia nanao sary maneho fomba iray mampiasa ireo andriamby sy zavatra elektronika kely mba hiditra an-tsehatra ny jiro sy ny feo ary ny hidin-dalamby ihany koa.
Chiu Chai Hao of Singapore ihany koa dia mikasa ny hanavotra ain'olona maro, ny azy kosa dia amin'ny fahafahana mahazo rano madio [afaka tamin'ny ] tsy tratry ny ranom-by mavesatra maloto avy nampiasaina ho ranon'ny toby nokleary.
Nifantoka tamin'ireo foto-kevitra mikasika ny fitsaboana ihany koa ny ekipan'i Nishanth Kumar, Krishna Betai sy Anish V Malladi avy any Inde, amin'ity indray mitoraka ity dia manamboatra famantarana izay mampahafantatra ireo mpîtsabo fa rehefa ambany ny aavon'ny ranoka amin'ny lalàn-drà lehibe dia efa tsaratsara kokoa ny fitsaboana ny marary.
Maro ireo tetikasa novolavolain'ireo tanora manam-pahaizana miandry ny safidinao amin'ireo Mari-pankasitrahan'ny Safidim-bahoaka. Afaka mifidy iray isaky ny sokajin-taona ianao.